Ihe asaa ị kwesiri ịma maka ịgwọ ụra - BBC News Ìgbò
30 Maachị 2018
Nkenke aha onyonyo Amaghị ọnụọgụ mmadụ ole na-ekwoụra n'ụwa
Ikwo ụra bụ ihe dị ebe niile ma na ọ bụghị ihe gba aka, onwere ihe na-akpata ya.
Ikwo ụra bụ mkpọtụ mmadụ na-eme na-amaghị ama oge ọ na-arahụ ụra.
Ndị ọnụ na-eru n'okwu n' ahụike kwuru na ikwo ụra na-eme oge ikuku nwere nsogbu n'ime akpịrị mmadụ.
Dịka Britishsnoring.co.uk, websait ọkachamara nike gbasara ikwo ụra, sị kọwa,ihe na-akpatakarịsị ikwo ụra bụ; oke ibu, ịṅụ mmanya,ise anwụrụ, ọrụ onye na-arụ na ọrịa dịka onye na-arụ eme a na-eme asbetos, egwupụta ihe maọbụ ebe a na-edowe ngwa ahịa(warehouse) ebe oke etum na-adị nwere ike ibute ụkwara na azụzụ nke ga-enuba onye ahụ n'ikwo ụra.
Ọrịa ntị(ear infection), ọrịa mburupụta ụwa(congenital diseases) dịka Down syndrome nwekwara ike ibute ịgwọ ụra.
Kedu ihe ofe Egusi gị na-enye ahụ gị?
Ihe ị na-amaghị maka ụkwa ị na-eri
Ihe ndị ị kwesiri ịma maka ikwoụra:
1. Ndị na-ekwo ụra na-enwe nsogbu ahụike ugboro atọ karịa ndị na-anaghị ekwo ụra
2. Ikwo ụra na-esi n'agbụrụ. O nwere ike ọ bụrụ nna nna gị bunyere gị ya
3. Ndị na-edina ndị na-ekwo ụra nso kwuru na ha anaghị ehi ụra nkeọma, karịa elekere ato rue elekere ise
4. Ndị na-ekwo ụra na ndị ha na ha na-edina nso nwere ike inwe nti ike karịa ndị na-anaghị ekwoụra
5. Ọtụtụ dị na nwunye na-ese okwu kwuru na ọ bụ maka ikwo ụra
6. Ọ bụrụ na mkpọtụ ị na-eme oge i na-ekwoụa siri ike, ọ ga-abụ na i buru ibu nke ukwu
7. Ndị na-ekwoụra nwere ike inwe ọbara mgbalielu, ọrịa obi, ọrịa stok, ọrịa shuga na ọrịa abụba ugbo ise karịa ndị na-adịghị ekwoụra.
Ọtụtụ na-eche na ikwo ụra anaghị akwụsị akwụsị mana ndị ọkachamara na-ekwu na o nwere ụfọdụ ihe i nwere ike ime iji belata ya maọbụ kwụsị ya kpamkpam:
1. Taa ahụ
Ọ bụrụ na ihe na-akpata na i na-ekwo ụra bụ maka na i buru ibu karịa, ị mara na ị mara abụba nke nwere ike idi na-atọ gị n'olu maọbụ n'akpịrị oge ị na-ehi ụra. Ị nọ n'ahụike site na iri ezi nri nakwa imegharị ahụ(exercise) ga-enye aka gbochie ikwo ụra.
2. Belata ịnụ mmanya ike
Mmanya na-eme ka akwara mmadụ zuo ike karịa oge mmadụ na-ehi ụra. Nke a nwere ike ịkpachi akpịrị ebe mmadụ si eku ume ga-eme na ikuku agaghị enwe ike gafe nkeọma. Ndị ọụ ahụike na-ekwu na mmadụ belata mmanya ike, i nwere ike i belata ikwo ụra.
3. Dina n'akụkụ gi
Idina n'azụ nwere ike ime ka abụba dị mmadụ n'ire, nti na onu gbochie ebe ikuku si aba makwa apụta n'imi mmadụ. Ya bụ gbaa mbọ rahụ n'akụkụ gị.
4. Hichaa imi gị nkeọma tupu ilabaa ụra
Ọ bụrụ na azụzụ na-eme gị ma imi gị ọkpọchiri akpochi, ị mara na i nwere ike ikwo ụra. Ya bụ gbaa mbọ zie imi gị nke ọma tupu ị laba.
Enwe achụpụla ndị mmadụ na Legọs
Senegal aluchaala ọgụ Algeria enwere akụkọ
Nwaokorobịa gburu enyị ya nwoke maka nwaanyị
Onye ga-amaburu Iko Afcon taa?